Qorsho looga hor-tagayo dib u doorashadda Farmaajo oo ka socda Kismaayo | KEYDMEDIA ONLINE
Qorsho looga hor-tagayo dib u doorashadda Farmaajo oo ka socda Kismaayo
Deni oo ka duulay Muqdisho ayaa ka degay magaaladda Kismaayo, halkaasoo uu kulamo kula leeyahay Axmed Madoobe.
KISMAAYO, Soomaaliya - Warar hoose oo Keymedia Online soo gaarey ayaa sheegay in Kismaayo lagu qorsheynayo isbahaysi xoog leh oo looga hortagayo inuu mar labaad soo laabto Farmaajo.
Madaxweynaha Puntland Saciid Deni ayaa Maanta tagey Kismaayo, iyadoo magaaladda si wayn usoo dhaweeyay Axmed Madoobe, ninka ay mudooyinkii dambe xulufada ku ahaayeen la dagaalanka Farmaajo.
Deni ayaa sida aan xogta ku helnay kala hadlaya Axmed Madoobe in Xildhibaan ay wadato Villa Somalia aan lagu soo dooran Kismaayo, islamarkaana ay kawada shaqeeyaan labada maamul in lasoo saaro xubno mucaarad ku ah Farmaajo.
Saddexdii sano ee ugu dambeysay, Jubbaland ayaa dhibane u ahayd Farmaajo oo cunaqabateyn saarey Kismaayo, kana joojiyay diyaaradii aadayay degaanada uu Axmed Madoobe maamulo, taasii dhalisay cadaawad xoogan oo u dhaxaysa labada dhinac oo isku haya maamulka Gedo.
Farmaajo ayaa isku dayay inuu ka takhaluso oo xilka ka qaado Axmed Madoobe doorashadii August 2019 ka dhacday Kismaayo ayuu diiday inuu natiijadeeda aqoonsado, illa markii dambe uu ku qasabay safiirka Mareykanka.
Deni oo Axmed Madoobe daarood ahaan isku bahaystay ayaa garab taangaa marwalba Jubbaland oo difaacayay, waxayna labadan hogaamiye ayaa laf-dhuun-gashay ku noqdeen maamulka Farmaajo.
Macluumaad kale oo KON heshay ayaa sheegay in Saciid Deni, Madaxweynaha Puntland uu Musharax yahay, islamarkaana doonayo inuu u tartamo xilka Madaxweynaha dalka Soomaaliya, arintaasna ay qeyb ka tahay socdaalkiisa Kismaayo.
Warbixin 25 July 2021 8:25
Todobaadkii tagey, waxaa ka billowday dalka guluf dagaal iyo diyaar-garow doorasho oo is-jiid-jiid wadata, iyadoo RW Rooble uu qaadey tallaabo aad loo soo dhaweeyay, uga bogo macluumaad kala duwan, Warbixinta Todobaadlaha Keydmedia Online.
Warar 24 July 2021 7:35
Warar 10 July 2021 20:20